Real Madrid labada kubad sameeye EPL ugu tayada wanaagsan ayay soo qaadan doontaa | Bakool.net
Home / CAYAARAHA / Real Madrid labada kubad sameeye EPL ugu tayada wanaagsan ayay soo qaadan doontaa
Kooxda Real Madrid waxaa macalin looga dhigay Zidane oo dib ugu soo laabtay hogaanka Bernabue 10-bilood kadib asigoo laga rabo kooxdan inuu dib u dhis xoogan ku sameeyo waxaana la siin doonaa 300m oo pound inuu xagaagan ku suuq galo.
Haddaba shabakada Independent ayaa ogaatay in Real Madrid xagaagan soo qaadan doonto labada kubad sameeyee Premier League ugu tayada wanaagsan Eden Hazard iyo Christian Eriksen madaama ay ka siman yihiin in weli kooxahooda qandaraas kordhin u sameynin.
Macalin Zidane ayaa aaminsan in Christian Eriksen oo 27-jir ah badal sax ah u noqon karo Luka Modric oo 33-jir ah waxayna Spurs ku guul dareestay kubad sameeyaheeda Danish-ka ah inay heshiis cusub ka saxiixaan waxaana lagu heli karaa 80m oo pound.
Macalin Zidane isaga ayaaba taageero weyn u ah Hazard oo doonayo inuu xagaagan Chelsea isaga hayaamo waxaana lagu heli karaa 28-jirkan 100m oo pound ayadoo uu badal u noqon doono Grathe Bale oo kooxda laga diraayo kaasi oo 29-jir ah sidoo kalena kalsoonida maamulka lumiyay.
Previous: Guddiga Joogtada ee Golaha Aqalka sare oo Kulan ku yeeshay Magaaladda Muqdisho (Sawirro)
Next: Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda Soomaaliya oo saxiixay buugga tacsida ee dadkii ku le’day diyaaradda burburtay ee Itoobiya